Ahoana no hanatsarana ny SEO Amazona?
Araka ny antontan-kevitra momba ny statistika, maherin'ny 55% n'ireo mpampiasa miezaka ny manao fivarotana an-tserasera, dia mitodika any amin'ny sehatra varotra Amazon mba hahitany izay ilainy. Izany no teboka ho an'ny mpividy amin'izao androntsika izao. Ny mpampiasa dia mijery ity sehatra ity amin'ny voalohany noho ny antony marim-pototra toy ny laza tsara momba ity tranonkala ity, ny fahafahana mampitaha ny vidiny ary ny vidiny mirary indrindra amin'ny tranonkala, ny fahafahana mamaky ny tamberin'ny mpanjifa, sy ny sisa. Ankoatr'izay, fantatry ny mpampiasa fa amin'ny tranga tsy dia misy dikany amin'ity sehatra ity dia hahazo fanonerana feno izy ireo - pink dress with lace. Ireo singa rehetra ireo dia mahatonga an'i Amazon ho mahasoa ny mpivarotra sy ny mpivarotra. Izany no antony, raha tianareo hifantoka amin'ny lehibe indrindra amin'ny mpanjifa mety indrindra, Amazon no sehatra tsara indrindra ho an'ireny tanjona ireny. Mba hahazoana ny ankamaroan'ny lisitra ao amin'ity seha-pihariana varotra ity, dia mila mampiditra tetikady fanadiovana fikarohana ianao mba hampiseho ny vokatrao sy ny orinasa.
Ity lahatsoratra ity dia natao hanampiana anao hanatsara ny sehatra Amazon anao sy hampiseho ny vokatrao hita amin'ity sehatra antserasera ity.
Ny fitsipiky ny vokatra eo amin'ny Amazonia
Misy marimaritra marim-pototra tokony hoeritreretinao hatao mba hanatsarana ny pejy Amazon anao SEO. Raha te-hamorona lisitry ny vokatra tsara ianao dia mila mahafantatra izay lafiny ilainao hifantohana.
Araka ny voalazan'ny algorithm of Amazon A9, ny mpanjifa iray dia mety hahita ny data manaraka aorian'ny fikarohana iray:
ny vidin'ny vokatra;
tenimiafina sy teny etsy ambany;
Fahazoana vokatra (amin'izao fotoana izao na misy tahiry);
tantara momba ny varotra;
Ireo singa rehetra ireo dia azo zaraina ho fototry ny fahatanterahana sy ireo antony manan-danja. Ny singa voalohan'ny singa dia mampiseho ny ambaran'ny Amazon amin'ny alàlan'ny famolavolana ireo vokatra mifototra amin'ny vola horaisiny amin'ny fanaovana izany. Ny antony mampiavaka ny vokatra dia ny vokatra iray aorian'ny fikarohan'ireo mpampiasa.
Andeha aloha hifanakalo hevitra momba ireo singa fototra mifototra amin'ny vokatra. Voalohany indrindra dia fiovam-pivoarana izany. Ny fiovam-po dia hita fa misy antony marin'ny Amazon. Afaka mampiasa tetika mahomby mahomby ianao mba hampisehoana an'i Amazon ny vokatrao dia miova tsara tsara. Rehefa tonga amin'ny fahazoana sary mazava momba ny fiovàna dia sarotra ny Amazon. Azonao atao ny manara-maso ny fomba fanao samihafa toy ny singa sy fivoriana, saingy tsy ampy ny data mba hifehy ny toe-javatra rehetra.
Azonao atao ny mahita ny antontam-baovao mifandraika amin'ny alàlan'ny fandehanana any amin'ny Reports, avy eo ny tatitra momba ny raharaham-barotra, ny pejy finday mivelatra ary farany ny fivezivezena. Eto ianao dia mila manamarina ny isam-piraisana session na amin'ny teny hafa ny isan'ny fivoriana.
Mba hanatsarana ny fialan-tsasatra Amazon, mila mila manitsy ny vidin'ny vidin'ny boaty ianao. Ohatra, ny baolina nodidiana isaky ny boaty fividianana dia hanondro an'i Amazonia fa ianao dia miova bebe kokoa.
Azonao atao ny manova ny mari-pahaizana amin'ny alàlan'ny sary fanatsarana sy ny fanatsarana ny vidin'ny vokatra.
Ankehitriny, andeha hojerentsika ireo antony amoron-dranomasina Amazon izay mifototra amin'ny maha-zava-dehibe. Ireo singa manan-danja dia mikasika ny maha-zava-dehibe ny fikarohana sy ny fampahalalana hita ao amin'ny pejy.
Mba hampifanandrify kokoa ny pejy misy ny fangatahan'ilay mpampiasa, dia mila manatsara ny lisitry ny lisitry ny vokatrao ianao. Ilainao ny mampiditra ireo teny manan-danja indrindra sy voakilasy ao amin'ny lohateninao sy ny famaritana izay hanampy ny mpanjifa tianao hahita ny vokatrao amin'ny pejy.
Ny singa fototra ilainao hampidirina ao amin'ny lohanao dia marika vokatra, famaritana fohy (loko, habeny, material, quantité), andalana amin'ny vokatra ary ho an'ity vokatra ity dia natao (ankizy, olon-dehibe, sns.)